Iyo yakagadzikana vhezheni yeSublime Chinyorwa 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva akati wandei apfuura kuburitswa kweiyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeSllime Chinyorwa 4 chakaziviswa, iyo inouya nguva pfupi yapfuura makore matatu nehafu kubva kuvhurwa kwebazi rapfuura 3 uye kuti nekuenzanisa matavi maviri akatsiga aya, tinogona kuona kuti Sublime Chinyorwa 3.0 chinosanganisira huwandu hukuru hwekuvandudza uye hwakanaka chaizvo hunoratidza kushanduka kweiyo chirongwa.
Kune avo vasina kujaira Sublime Chinyorwa, ivo vanofanirwa kuziva chiiIyi yakazara-zvinyorwa mhariri iyo inonyanya kukwezva kune mapurogiramu. Pakati peiyo runyorwa rurefu rwemikana yatinowana, isu tine mukana wekusarudza zvikamu zvakasiyana zvechinyorwa izvo zvinogona kuzogadziriswa panguva imwe chete, syntax inosimbisa nerutsigiro rwemitauro inopfuura makumi mana uye kugona kukuru.
1 Huru zvinyorwa zvitsva zve Sublime Chinyorwa 4
2 Maitiro ekuisa Sublime Chinyorwa 4 paLinux?
Huru zvinyorwa zvitsva zve Sublime Chinyorwa 4
Yeyakanyanya kukosha shanduko inomira mune iyi nyowani vhezheni yemupepeti, sezvo chikuru hunhu iri iyo rutsigiro rwezvishandiso zvinoshandisa maARM processor seRaspberry Pi. Uku ndiko kushanduka kwakakosha mumisimboti yekushandisa, kubva mukati memidziyo mikuru kune iyo Iyi rutsigiro ndeye Mac Apple Silicon. Kunyangwe ARM64 inovaka yaiwanikwa yekuyedza kushandisa kuburikidza neyakavanzika beta chirongwa kare, izvozvi zvave kuita kuti uwane ARM64 kuvaka zvakananga kubva kune yekuisa peji uye unakirwe nehurongwa uchienda.
Kune rimwe divi, zvakare Tsigiro yemazhinji matabhureki akasarudzika, iyo iyo mafaera emafaira akagadziridzwa kuti aite zvakapatsanuka maonero, iine yakazara interface tsigiro uye yakavakirwa-mukati mirairo.
Tinogona zvakare kuwana izvo Sublime Chinyorwa 4 ine rutsigiro rwekugona kushandisa iyo komputa GPU kupa iyo interface uye nekupa inotsvedza mushandisi interface uchidya zvishoma simba. Nekubatanidzwa kwerutsigiro urwu, vhezheni yazvino inotsigira resolution dzescreen kusvika ku8K. Zvisinei, kupa kweGPU kwakaremara nekutadza paWindows neLinux.
Iyo Adaptive theme inowedzera rutsigiro rweyetsika zita mabara.
Rutsigiro rwakakodzera rweWayland kuratidza server.
Uchishandisa VSync yezvipenga panzvimbo pekugadziriswa 60Hz.
Dhonza uye udonhedze zvinyorwa zvino zvatsigirwa.
Rutsigiro zvirinani rwekuteedzera uye kunama nezvimwe zvinoshandiswa zvisingatsigire UTF-8 zvinyorwa.
Native faira dialogs seaya anoshandiswa mu KDE.
Sisitimu duramazwi dzave kuwanikwa kuLinux.
Pakupedzisira zvinotaurwa zvakare kuti Kubva ikozvino zvichienda mberi, kana mutengi akatenga rezinesi, ichave inoshanda kumatatu anotevera makore zvekuvandudza pane kusungirwa kune imwechete vhezheni yemuparidzi.
Mushure memakore matatu apfuura, unogona kushandisa kiyi yako nesoftware vhezheni yakaburitswa munguva iyoyo, asi kuti umise shanduro nyowani, unozofanirwa kutenga rezinesi rekuvandudza.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo mu chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Sublime Chinyorwa 4 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyo nyowani vhezheni yechinyorwa chino, Ivo vanogona kuteedzera chero eanotevera rairo, sezvakakodzera.
Panyaya yeavo vari Debian, Ubuntu kana vashandisi vanobva yeaya, ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye mairi vachanyora zvinotevera:
Zvino ivo ndivanaani Arch Linux vashandisi uye zvigadzirwa yeizvi, izvo zvavanofanira kuita kunyora zvinotevera mune chinouraya:
Kana vari avo vari vashandisi ve RHEL, CentOS kana chero chinobva pane izvi. Mirairo yavanofanira kunyora ndeiyi:
Muchiitiko cheFedora uye zvigadzirwa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yakagadzikana vhezheni yeSublime Chinyorwa 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Sublime zvinyorwa 4 iri kudya ingangoita ese maCUU muGNU / Linux
Vamiriri vemitemo veUS vakaunza mabhiri akati wandei ekugadzirisa matekinoroji ehunyanzvi uye vanogona kuseta zvisati zvaitika